Allgedo.com » Wariye Cabdimalik Muuse Coldoon oo Hargeysa lagu xiray
Wariye Cabdimalik Muuse Coldoon oo Hargeysa lagu xiray
Print here| By: allgedo.com: Wednesday, February 15, 2017 // u Jawaab
War goor dhow naga soo gaaray magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in wariye Cabdimalik Muuse Coldoon lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Hargeysa kaddib markii uu kasoo noqday booqasho uu dhawaan ku tagay magaalada Muqdisho.
Ujeedada xarsigga Coldoon ayaa lala xariirinayaa kulamo uu horay ula yeeshay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Maxamed Cali Farmaajo iyo asaga oo qeyb ka ahaa banaanbaxyadii Muqdisho ka dhacay ee lagu taageerayay madaxweyne Farmaajo.
Wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ah shaqsi ku caanbaxay wadaniyad iyo asaga oo aanan marnaba qarsan dareenkiisa ku wajahan jaceylka uu u qabo dadkiisa iyo dalkiisa, ayaa waxuu marar badan kasoo dhex muuqday baraha kulanka bulshada asaga oo mar walba garab taagan oo caawinaya dadka danyarta ah ama dhibaateysan.
Inkasta oo aanan la ogeyn sababta keentay in uu maamulka Hargeysa xiro wariye Coldoon, haddana waxaa loo maleynayaa in ay la xariirto xiriirada uu wariye Coldoon la leeyahay guud ahaan umadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa koofurta Soomaaliya.
Maxamed Cabdi, Allgedo Online
Muqdisho – Somalia.